सबै प्रतीकहरू प्रतीक सेटमा आयोजित गरिन्छ.सूची बाकसबाट इच्छित प्रतीकहरू चयन गर्नुहोस्. प्रतीकहरूको अनुकूल समूह तलको फाँटमा देखिन्छ.
जब प्रतीक चयन गरिन्छ, यसको आदेश नाम प्रतीक सूची तल देखिन्छ र परिमार्जित संस्करण बाकसको दायाँमा देखिन्छ.टिप्पणी गर्नुहोस् कि नाम टाइप गर्नु पर्दछ आदेश सञ्झ्यालहरूमा यहाँ प्रदर्शित जस्तै (केस-संबेदनशील).
प्रतीक घुसाउनका लागि, यो सूचीबाट चयन गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् घुसाउनुहोस्. अनुकूल आदेश नाम आदेश सञ्झ्यालहरूमा देखिन्छ ।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् सम्पादन प्रतीकहरू खोल्नका लागि सम्बाद
Title is: प्रतीकहरू